Imithi engu-8 edala ukuhlolwa kwezidakamizwa ezingamanga (nezinye izinto ezinhlanu) - Imininingwane Yezidakamizwa | Julayi 2021
Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Izindaba, Wellness Imfundo Yezempilo, Izindaba Ukuphuma Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, The Checkout Izidakamizwa Vs. Umngani Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani Umphakathi Inkampani, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Imithi engadala ukuhlolwa kwezidakamizwa ezingamanga
Imithi engadala ukuhlolwa kwezidakamizwa ezingamanga
Kunezimo eziningana lapho ungacelwa ukuthi uqedele ukuhlolwa kwezidakamizwa-lapho ufaka isicelo somsebenzi omusha, noma uma ungumfundi noma umsubathi. Izikrini zemithi yomchamo yisivivinyo esivame kakhulu (yize kungahlaziywa olunye uketshezi lomzimba). Ukuhlolwa kukodwa kulula futhi akunabuhlungu, futhi kudinga kuphela isampula yomchamo. Kungazizwa kungakhathazi ukucelwa ukuthi wenze ukuhlolwa kwezidakamizwa, futhi kubalulekile ukwazi ukuthi kunemithi ethile nezinye izinto ezingadala ukuhlolwa kwezidakamizwa okungelona iqiniso.
Kuyini ukuhlolwa kwezidakamizwa okungelona iqiniso?
Umphumela omuhle wamanga wenzeka lapho indlela yokuthola izidakamizwa ehlaziyayo ibona amanye ama-molecule emzimbeni njengezidakamizwa ezingekho emthethweni lapho ungadlanga lutho olungekho emthethweni. Izidakamizwa ezivame ukuhlolwa zihlanganisa ama-amphetamine / ama-methamphetamine, ama-benzodiazepines, ama-barbiturates, insangu, i-cocaine, i-PCP, i-methadone, ne-opioid (i-narcotic).
nini ukuthatha ama-probiotic lapho uthatha ama-antibiotic
Ucwaningo olwenziwe eBoston Medical Center lukhombisa ukuthi ukuhlolwa kwezidakamizwa kuveza izinzuzo ezingekho ezingeni elingu-5% kuya ku-10% wamacala. Yize leli kungelona iphesenti eliphezulu, imiphumela yokwehluleka ukuhlolwa kwezidakamizwa ingabeka engozini umsebenzi wakho, imfundo yakho noma amathuba akho omsebenzi. Imiyalo eminingi ejwayelekile, imishanguzo yokuthenga, amakhambi, amavithamini, kanye nokudla okuthile kungaqala ukuhlolwa kwezidakamizwa okungelona iqiniso.
Uma kukhulunywa ngemigomo,izexwayiso ziyatholakala, kepha imvamisa kuphela uma uzifuna, sizindlelaBrent McFadden, Pharm.D., Umnikazi we I-Brent's Pharmacy & Isifo Sikashukela eSt. George, e-Utah.Imvamisa kuphrintiwe kahle futhi iningi labantu, kokuhlangenwe nakho kwami, alufundi izinto abazinikezwe usokhemisi.
Imithi engu-8 edala ukuhlolwa kwezidakamizwa ezingamanga
Ngakho-ke, uma ufana nabantu abaningi abangaziniki isikhathi sokufunda ukuphrinta okuhle, nalu uhlu lwemithi enikezwa nemithi engathengiswa ezitolo engadala ukuhlolwa kwezidakamizwa okungelona iqiniso.
1. Ama-analgesics / ama-NSAIDS
Imithi IDaypro (oxaprozin), enqunyelwe izinhlobo ze-arthritis, ingahle iholele ekuhlolweni okungamanga kwe-benzodiazepines. Imithi yezinhlungu bhabha kungadala i- umphumela omuhle wamanga we-PCP . Imithi yezinhlungu ezivamile zokulwa nokuvuvukala njenge- I-Advil (ibuprofen)futhiI-Aleve (naproxen)kungenza ukuthi uhlole ukuthi unama-barbiturates, i-THC (ama-cannabinoids), noma i-PCP.
2. Imithi elwa namagciwane
I-Quinolone ama-antibiotic, njenge I-Levaquin ( umagazine ) noma ECyprus ( ciprofloxacin ) kuvame ukubekelwa izifo ezithile (i-urinary tract, sinus, njll.). Bakhonjisiwe kubangele umphumela omuhle womchamo wama-opiates. I-Rifampin, i-antibiotic esetshenziselwa ukwelapha isifo sofuba, nayo ingaholela ekutholakaleni okungamanga umphumela wama-opiates .
Izidambisamagciwane - njenge I-Wellbutrin ( bupropion ), I-Prozac ( i-fluoxetine ), ISeroquel ( quetiapine ), I-Effexor ( venlafaxine ), trazodone , futhi amithole —Ingadala umphumela omuhle ongamanga we-amphetamine noma i-LSD.
Ama-antihistamine nezinye izinsiza zokulala eziqukethei-diphenhydramine (efana ne- UBenadryl ) kungadala umphumela omuhle wamanga we-PCP noma i-methadone. I-Doxylamine (isithako esisebenzayo ku-Unisom) futhi kungadala umphumela omuhle wesidakamizwa se-methadone, opiates, ne-PCP.
OKUSHIWO: Imininingwane yeBenadryl | Imininingwane ye-Doxylamine
5. Izikhuthazi zesistimu yezinzwa emaphakathi (CNS)
URitalin ( imethylphenidate ) kanye Adderall asetshenziselwa ukwelapha i-ADHD, futhi aziwa ngokudala i-positive yama-amphetamine kanye ne-methamphetamines.
OKUSHIWO: Imininingwane kaRitalin | Imininingwane ka-Adderall
kwenzekani uma uthatha ama-melatonin amabili
I-Dextromethorphan, isithako esisebenzayo eRobitussin, Delsym, nakwamanye ama-suppressants wokukhwehlela okungaphezulu kwamakhompiyutha, kungadala ukuthi isikrini somuthi sibe nephutha kuma-opiates kanye / noma kwi-PCP.
OKUSHIWO: Funda ngezingozi zokulutha isiraphu yokukhwehlela
Isithako esiyisihluthulelo ku Udidekile (i-pseudoephedrine) nayo iyisithako esiyinhloko sokwenza i-methamphetamine.
OKUSHIWO: Imininingwane ehlangene
8. Proton pump pump inhibitors
Prilosec ( omeprazole ), I-Nexium ( esomeprazole ), futhi Prevacid ( lansoprazole ) zisetshenziselwa ukwelaphaisifo se-reflux se-gastroesophageal( IGERD ) nomaisifo se-peptic ulcer(PUD)futhi kungadala i-positive ye-THC.
Isincomo sami kunoma ngubani othatha le mithi engahlolwa izidakamizwa okokuqala futhi okubaluleke kakhulu ukuthembeka kumhloli, kusho uDkt. McFadden. Yazi ukuthi ngabe izindondo ozithathayo zingadala i-positive futhi wazise umphathi wohlolo. Uma kunqunyiwe, qiniseka ukuthi unelebula elivela ekhemisi, elizokhombisa ukuthi umuthi wawunikwe wona. Uma kungumkhiqizo we-OTC, yiba nohlobo oluthile lwemibhalo (isitsha ebikuso, inothi elivela kudokotela wakho, njll.) Osithathile.
Izinto ezi-5 ezivamile ezingadala izinzuzo ezingamanga
Ngaphezu kwemithi kadokotela, lezi ezinye izinto ezijwayelekile zingaholela ekuhlolweni kwezidakamizwa ezingamanga.
1. Izithako ze-Vitamin B
I-Riboflavin, eyaziwa nangokuthi i-B2, itholakala ku-hemp seed oil futhi ingabuyisa i-aamanga ITHC (insangu)kuyafundwa.
i-d3 ifana ne-vitamin d
2. I-CBD ( cannabidiol)
CBD yingxenye engeyona eye-psychoactive yesitshalo sensangu eye yaba yikhambi elidume kakhulu lakho konke kusuka ekulawuleni izinhlungu, ekukhuthazeni ukulala, ekusizeni ukuqeda ukukhathazeka. Isikrini sokuhlolwa kwezidakamizwa zomchamo ubukhona be-THC, ingxenye yengqondo engasebenza ngengqondo, kepha inkinga ingavela ngenxa yokuthi le mikhiqizo ayilawulwa kahle futhi ukungcoliswa okungahle kwenzeke.Njengoba i-CBD itholakala kuyo yonke into kusuka kumaphakethe okuphuza, ukwakheka kwesisindo, kuya kumathinikhi azo zonke izinhlobo, izivivinyo zomchamo ezingekho emthethweni ze-THC zizokwanda kakhulu, kuxwayisa uDkt McFadden.
3. Imbewu yePoppy
Ukudla imbewu ye-poppy ngaphambi kokuhlolwa kwezidakamizwa (njenge-muffin noma ku-bagel) kungadala umphumela omuhle wezidakamizwa wama-opioid. Izimbewu zePoppy zivela embewini ye-opium poppy kanti ngenkathi imbewu ihlanzwa ngaphambi kokusetshenziswa, ingahle iqukathe inani lezinsalela ze-opium. Ngo-1998, uhulumeni wesifundazwe waphakamisa umkhawulo kuma-opiate kusuka kuma-micrograms angu-0.3 kuya kuma-micrograms ama-2 nge-milliliter, kepha ezinye izindawo zokuhlola zisahamba ngezinga elidala.
4. Ukugeza umlomo
I-Alcohol in sanitizer (kusuka ekusetshenzisweni okunzima), imishanguzo ethile yetshezi, kanye ne-mouthwash noma eminye imikhiqizo yokuhlanza umoya kungadala ukuthi uhlole ukuthi uphuza utshwala.
5. Amanzi amathoni
Amanzi we-Tonic aqukethei-quinine, futhi uma isetshenziswe kakhulu ingaholela ku- imiphumela emihle yamanga yama-opiates.
Uma ukholwa ukuthi wehlulekile ukuhlolwa kwezidakamizwa ngenxa yokuphuza umuthi kadokotela noma ukusebenzisa omunye wale mikhiqizo unezinketho.Ngingabeluleka ukuthi badinge umphathi ukuthi enze isivivinyo esithile ngaphambi kokuthi kuthathwe izinyathelo ezithile, kusho uDkt. McFadden, oncoma ukuthi amasampuli athunyelwe emalabhorethini ukuze kwenziwe i-mass spectroscopy assay ethile. Ngaphezu kwalokho, uma bekwazi ukufakazela ukuthi bathatha umuthi ongaveza into engeyona eyamanga (ngokukhiqiza incwadi kadokotela esemthethweni), umphathi angahlelela olunye uvivinyo ezinsukwini ezingama-30 kuye kwezingama-60 kamuva. Uma, ngaphansi kokuvunywa odokotela babo, lowo muntu engase abe semithini isikhathi eside kangako, kufanele kuvele ukuhlolwa okungekuhle.
Uhlela uhambo? Lungiselela ngalezi zeluleko ukuze i-COPD ingakubambezeli
Kunjani ukuphila ne-endometriosis
Ibiza malini iphilisi le-cialis
ayini amazinga kashukela egazini ohlobo 2 sikashukela
ungathatha i-allegra d lapho ukhulelwe
phezu kwemithi yokubala isisu esithukuthele
kukhona umehluko phakathi kokuhlaselwa uvalo nokuhlaselwa wukukhathazeka
kusho ukuthini tsh ekuhlolweni kwegazi